Yakatumirwa ne Tranquillus | Nyamavhuvhu 16, 2018 | hofisi
Kana iri yekushandura kwemavara kubva kune mumwe mutauro kune mumwe, zvinokurudzirwa kushandura mushanduri ane ruzivo kuti ave nechokwadi cheshanduro iri pedyo nekukwana. Apo chisarudzo ichi hachibviri, zvichipiwa bhajeti shoma, kushandiswa kwemashanduriro ekushandura paIndaneti kunofanira kufungwa. Kana vasina kunaka semushanduri wevashandi, ivo zvakadaro vanopa basa rinokosha. Pasinei nezvimwe zvikanganiso, shanduro dzekushandura paIndaneti dzakaona kuvandudzwa kukuru kupa shanduro dzakakosha. Saka takaedza kuongorora shanduro dzakanakisisa dzekushandura mumutauro kuti tive nemafungiro ehutano hwavo uye tive nekuenzanisa nokukurumidza.
DeepL Translator: ndiyo yakanakisisa iri paIndaneti yekushandura mashoko
DeepL mushanduri akachenjera ari oga uye pasina mubvunzo mushanduri wepamusoro wepachena mubasa. Shanduro dzaanopa zvinopfuura zvakanyanya kune dzimwe vashanduri veIndaneti. Kushandiswa kwaro kuri nyore uye kwakaenzana nedzimwe shanduro dzekushandura muIndaneti. Rongedza zvinyorwa kana kusungira zvinyorwa kuti zvishandurwe fomu yepaiti uye sarudza mutauro unotarirwa kuti uwane shanduro.
DeepL Translator iye zvino anongopa nhamba shoma yemitauro, kusanganisira Chirungu, French, Spanish, Italian, German, Dutch and Polish. Asi, ichiri pasi pekugadzira uye nokukurumidza, inofanira kukwanisa kushandura mune dzimwe mitauro seMandararin, Japanese, Russian, etc. Kunyange zvakadaro, inopa shanduro yakakwana yakakwana uye unhu hunopfuura humwe humwe shanduro.
Mushure mekuedza mishoma kweChirungu kusvika kuFrench kana mumwe mutauro pa DeepL, tinokurumidza kuziva kuti zvakanaka sei. Iyo yepakutanga uye haisi kuita shanduro chaiyo isinganzwisisi nenyaya. DeepL Translator ine chiitiko chinokubvumira kuti uise pane rimwe shoko mune shanduro uye uwane mazano ekufananidza.
Izvi zvinobatsira uye zvinoshanda kana zviitiko zvekushandurwa, saka iwe unogona kuwedzera kana kubvisa mazwi mumutauro wakashandurwa. Pasinei nhetembo, zvinyorwa zvegwaro, zvinyorwa zvepapepanhau kana mamwe mavara emagwaro, DeepL ndiye muturikiri wepachena mubasa rekutsvaga uye anowana zvibereko zvakanaka.
Shanduro yeGoogle, shanduro yakashandiswa zvikuru
Shanduro yeGoogle ndechimwe chezvinhu zvakakurumbira zvikuru zvekushandura mumutauro wevanhu kuti vashandise. Icho chimiro chekushandura mumitauro yakawanda ine unhu hwemashoko akashandurwa pahupamhi hwezvinoreva, asi kwete hwakanaka seya DeepL. Shanduro yeGoogle inopa zvinopfuura zvinyorwa zve100 uye inokwanisa kushandura kusvika ku 30 000 zviratidzo panguva imwechete.
Kana munguva yakapfuura iyi shanduro yemitauro yakasiyana-siyana yakapa zvakaderera zvakanyanya shanduro, yakashanduka yakawanda munguva ichangopfuura kuti ive nzvimbo yakashandurwa yekushandura uye nzvimbo yakashandiswa zvikuru munyika. Pane imwe nguva papuratifomu, ingopinda musarudzo yezvinyorwa uye shanduro yacho inowanzoona mutauro. Iwe unogona kushandura peji yewebhu nekuratidza URL yewebsite.
Nokudaro, mumwe anogona kungoita shanduro pamapeji ewebhu nekuwedzera shanduro yeGoogle Translate pane injini yekutsvaga yeGoogle Chrome. Zviri nyore kushandura zvinyorwa paPC kana kuti smartphone. Isu tinogona kushandura mhando dzemhando dzemafaira dzakadai sePDVD, Word files uye tinokwanisawo kushandura mazwi pamufananidzo mupfupi.
Akatendeka kune mweya weGoogle, mushanduri uyu ndiye nyore kushandiswa uye kuonekwa kukuru nyore, hakumanikidze zvikwereti kana zvimwe zvinokanganisa. Kushandurwa kweChirungu-French nemimwe mitauro kunonyanya kukurumidza uye kunoitika sezvo mashoko acho apinda. Nhaurirano inowanikwa inokubvumira kuti unzwe kune zvinyorwa zvinyorwa kana kuti shanduro imwe mune zvakanakisisa kudhinda. Google Translation inobvumira vashandisi kuti vashandise pane mamwe mashoko ari mumutauro wakashandurwa uye vabatsire kune dzimwe shanduro.
Tsanangudzo yekunyora uye geramendi inobatanidza kururamisa mashoko asina kunyorwa mumutauro unoshandurwa. Ne database ye mazana ezviuru zveshanduro, Google Translate nguva dzose inotarisira kupa shanduro yakakwana. Zvinogona kuchinatsiridza zuva rega rega nekuda kweA Feedback, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuwana dzimwe shanduro dzine simba.
Mushanduri weMicrosoft iyo sezvinonzi zita rayo rinorondedzerwa nekambani yaBill Gates. Icho chinangwa chokuva chinhu chinokosha uye dethrone imwe Internet translation software. Uyu mushanduri ane simba guru uye anoshandurirwa mumitauro inopfuura makumi mana. Mushanduri weMicrosoft akazviparadzanisa nokupa mararamiro ehupenyu aripo uye anobvumira kukurukura nevanhu vari kutaura mimwe mitauro.
Iyi yepakutanga basa iri nyore uye inoita hurukuro nevanhu vanotaura mimwe mitauro, zvikuru kwazvo. Mushanduri weMicrosoft anowanikwa sekushanda pane Android uye iOS. Iko kusina kubvumirana kunobvumira vashandisi kushandura magwaro pasina kubatana. Izvi zvinenge zvisina kuwanikwa zvekushanda zvakanaka zvakangoita sekuti zvakabatana neIndaneti uye inopa mapegi emitauro kuti ibudiswe pasina.
Saka zvinobvira kuramba ichishandisa kushanda panguva yekufamba kune imwe nyika neHomefone mumhepo. Mushanduri weMicrosoft anowedzerawo injini yekucherechedza kunyora paIOS inokubvumira kushandura chero chirevo kana chirongwa mutauro wokumwe.
Iyi software inopa mifananidzo yakajeka iyo isiri nyore uye isingasviki. Iko kunaka kwezvishanduro zvaro zvechokwadi nekuda kwekugona kwekupa mhinduro. Kungofanana neGoogle Translator, inogona kuona mutauro wemutauro uye inopa mikana yekuteerera shanduro dzakarongwa.
Reverso yekushandura chiFrench
Kuti tishandure zviri nyore mutsara wekuIndaneti kubva kuFrench kusvika kune mumwe mutauro kana kuti mutauro wokumwe kuFrench, Reverso ndiyo shanduro inofanira kushandiswa kutanga. Basa rekushandura iri paIndaneti rinonyanya kubva muchiFrench uye rinobvumira kushandura mutsara muchiFrench kune imwe yemitauro mitatu inopiwa uye inofanirwa uye inoshandiswa. Kunyange zvazvo Reverso chete inoshandura mashoko eIndaneti mumitauro mipfumbamwe, inoshanda seimwe shanduro yakashandurwa neIndaneti-uye inonyanya kushanda mukushandura mazwi echidimbu nemashandisirwo ayo akabatanidzwa.
Reverso inopa zvisinei nokuti peji isiri iyo yakanakisa peji isina ergonomics uye zvipembenene zvisingagumi zvinowanzovhiringidza mushumiri. Inoramba iri mushanduri wemhando, mishanduro yemitauro inooneka pakarepo uye nzvimbo inopa mukana wekuterera kushandurwa kwakawanikwa. Mushandisi anogona kubatsira pakuvandudza kweshanduro kuburikidza nekuisa mhinduro uye kuratidza maonero ake pane shanduro dzakawanikwa.
WorldLingo inoshandiswa pakushandura magwaro mumutauro mumitauro inopfuura makumi matatu uye inopikisa zvakanyanya yepamusoro pekushandura nzvimbo dzepaIndaneti. Kunyange kana iine shanduro yakarurama, inenge ichiine nzira yakawanda yekukwikwidzana neyakanakisisa. WorldLingo ine chimiro chakajeka uye inowanzoona mutauro wemutauro.
Nzvimbo iyi inopawo mitauro inonakidza nehuwandu hwehuwandu hwekushandura. Inogona kushandura chero mhando yemagwaro, mapeji ewebhu uye emaimeri. Inogona kushandura mapeji ewebhu mumitauro yakasiyana ye13 kubva pakusangana kweizvi. Kushandura mairi, zvakakwana kupa kero yemutumi uye WorldLingo ari mutoro wekutumira zvakananga shanduro yemashoko.
Iri shanduro iri nyore kushandisa, rinosanganisira zvinhu zvakasiyana uye rinotsigira mafaira akawanda. Asi muhurukuro yaro isingabhadhari, munhu anogona kungoshandura mazita e500 kusvika pahuwandu.
Yahoo kuBhabhironi Translation
Turusi repamhepo reYahoo ratsiviwa nesoftware yeBabironi. Iyi software inopa shanduro mumitauro ingangoita makumi manomwe nenomwe. Rinozivikanwa seduramazwi rakanaka rekushandura mazwi kwete magwaro marefu. Zvikurukuru, haina kumira mushe pamhando yeshanduro dzayo uye inononoka. Pamusoro pezvo, isu tinodemba kuwanda kwezviziviso zvinopinda izvo zvinoderedza ergonomics yesaiti. Mushanduri weBhabhironi anogona kubatanidzwa paSmartphone uye imwe dhijitari mudziyo. Iyo zvakare inobvumidza iwe kusarudza izwi kana chirevo pane gwaro, webhusaiti, a tsamba kushandura uchipa kushandura chiriporipo. Iyo application inoshandisa akawanda maduramazwi epamhepo uye haigone kushandiswa kunze kwenyika. Inogona kushandiswa chete kana wakabatana kune 3G, 4G kana Wifi network.
Systran, shanduro yekushandura online
Iyi shanduro yepaIndaneti inoverenga mitauro ye15 mune zvayo uye ine 10 000 simba rekuita. Inopa ergonomics inonakidza pasina kutengeserana. Iyo software inokwanisa kukwanisa kureva zvinoreva zvese zvemavara mumutauro unonyanya kutsvaga nehuwandu hwehuwandu hwekushandura. Kufanana nemamwe mabhuku ose ekushandura ari muIndaneti, Systran inopa zvinhu zvakawanda zvakadai sekushandurwa kwewebhu.
Asi, inopera shanduro yaro kumashoko e150 emutsara kana peji yewebhu. Kuti uende kudarika iyi muganhu, unofanirwa kuisa mubhadharo yakabhadharwa. Iyo software inobatanidza neHofisi neIndaneti Explorer zvidzidzo sebarimi. Nhamba yepaIndaneti, Shoko, Outlook, PowerPoint uye pasi pe5 MB inogona kushandurwa, uye magwaro akashandurirwa kusvika kune megabyte anogona nyore nyore kugadziriswa.
Ichi chishandiso chiri mukukwikwidza neBhabhironi uye chiri pasi pekunyoresa, iyo mapurogiramu maviri anopa zvikamu zvose zvakafanana zvakafanana. Tinogona kuderedza kubviswa kwezvimwe zvacho pakati pemamwe mazwi, kunyanya kana iri kopi uye peta yemashoko ekushandura. Dzimwe nguva zvinowanzoitika kuti mazwi anonamatirana pamwe chete, Systran haazooni kakawanda izwi iri muhana iyi uye anoisiya sezvariri pasina kuedza kuishandura. Somugumisiro, mushandisi anodiwa kuti awedzere nzvimbo nemaoko uye ozotanga kushandura.
Kukurumidza kuchinja Translator
Kukurudzira Translator ishanduro yakavimbika yekushandura nzvimbo ine shanduro yepamusoro zvishoma pamusoro pevhareji. Inobvumira kushandura zvisirizvo kubva kuChirungu uye kuimwe mimwe mitauro ye15. Uyu mushanduri pakutanga wakagadzirirwa vashandi, mabhizimusi uye vashandi vega. Izvo ergonomics peji yepaiti inobatsira uye iri nyore kushandisa uye nezvishomanana zvidimbu pane peji uye zviito zvekuita zvakajeka, zvakagadzirirwa uye zvakasimbiswa zvakanaka.
Apo paanosangana neshoko raasingazivi, Ita kuti Translator ave nechipo anosimbisa iri mukundu uye anopa mazano ekururamisa. Kukurumidza Kuita Translator ishanduro yemitauro yakawanda yakashandurwa yeWindows inogona kushandura magwaro, mapeji ewebhu, mafaira PDF, nezvimwe. Inowirirana neShoko, Outlook, Excel, PowerPoint kana FrontPage. Zviri nyore kugadzirisa zvirongwa zvekushandura maererano nezvinodiwa.
Izvo zvakanakisisa paIndaneti zvishandiso zvekushandura rugwaro kana peji August 16th, 2018Tranquillus
pashureNzira yekunyora chidimbu chezvenyanzvi?
zvinoteveraDzidza kuti ungaita sei ruzivo, mazano ose ekubudirira